शेन ब्ल्याक ट्वीटमा 'The Predator' फ्यानहरू छन् “I Spy” - iHorror
घर हरर मनोरन्जन समाचार शेन ब्ल्याक ट्वीटमा 'शिकारी' खेल्ने 'शिकारी' छन्
शेन ब्ल्याक ट्वीटमा 'शिकारी' खेल्ने 'शिकारी' छन्
लेखक / निर्देशक शेन ब्ल्याक भर्खर मा एक फोटो पोस्ट twitter उनको अत्यधिक प्रत्याशित उत्तरकथा teasing यो predator! तर अझै उत्साहित नहुनुहोस्। छविले एक रमणीय वन दृश्य चित्रण गर्दछ, जुन, पहिलो नजरमा, कुनै पनि जीवन शून्य देखिन्छ। जे होस्, यसको मतलब यो होइन कि शिकारी सादा दृश्यमा लुकिरहेको छैन।
के तपाई फोटोमा केहि देख्न सक्नुहुन्छ?
Shhhh ...। ऊ आउँदैछ। pic.twitter.com/iaQty5wy3Y
- शेन कालो (@ बोनाफाइड ब्लाक) मार्च 30, 2018
अप्रिल फुल डेको दिन इस्टर अण्डाको शिकार गर्ने अभिभावकले जस्तै, ब्ल्याकमा प्रशंसकहरूले ब्रशमा स्कर्स गरिरहेका छन् जुन केहि चीज खोज्दै जुन त्यहाँ वास्तवमै नहुन सक्छ। छवि एकै समयमा दुबै क्रूर र प्रतिभाशाली छ। त्यहाँ धेरै उत्साहित प्रशंसकहरू बाँकी छन् आफ्ना मोनिटरहरूमा झुकाव राख्दै, र चित्रको प्रत्येक वर्ग ईन्चमा जुम गर्दै।
फिल्मको लागि विवरणहरू अहिलेसम्म छातीको नजिक खेलेको छ, तर विपणन सामग्रीको अभावले तपाईंलाई समस्यामा नपार्नुहोस्। शेन कालो सुरु देखि फ्रन्चाइजी संग थियो, मूल फिल्म मा हकिन्स को भूमिका खेल्दै। एक्शन शैलीमा उनको लेखन / निर्देशन फिल्मोग्राफी यसका साथ बोल्दछ लेथिक हथियार फिलिमहरु, फलाम मानिस 3, र राम्रो मान्छे। उहाँलाई थाहा छ कसरी उत्कृष्ट चरित्रहरू लेख्ने, फिल्म सस्पेंसफुल एक्शन सीक्वेन्स, र अलि अन्धकार हास्य उनको कथाहरूमा मिसिन। पहिलो फिल्मको डाइ-हार्ड फ्यानको रूपमा, मलाई लाग्छ यो सीक्वल राम्रो हातमा छ।
हामीले भर्खर को-लेखक फ्रेड डेकरबाट सिक्यौं कि यो सिक्वेल हाल चलिरहेको छ रिशूटहरू, तर एक टिजर ट्रेलर चाँडै पोस्ट गरिनु पर्छ। रिलीज मिति हाल सेप्टेम्बर १ 14, २०१ for को लागि सेट गरिएको छ।
त्यतिन्जेल, मलाई लाग्छ म सबै फ्यानहरूका लागि बोल्छु जब म भन्छु, "ट्राइलामा जानुहोस्!"
के तपाई उत्साहित हुनुहुन्छ? प्रेटर? टिप्पणीहरूमा पोस्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् यदि तपाईंलाई लाग्छ कि फोटोमा शेन ब्ल्याक ट्वीटमा केहि देख्नुभयो! केहि फेला पार्ने पहिलो पहिलो भनेको "यौन tyrannosaurus!"
predatorसिकारीको फोटोशेन कालोशेन कालो शिकारीशेन कालो ट्वीटशेन कालो ट्विटरप्रेटरसिकारी चलचित्रसिकारी उत्तरकथा
'ट्रु डिटेक्टिभ' सीजन 'ले हरायो' हरित कोठा 'निर्देशक